Ciidamada dowlada Soomaaliya oo sarkaal al-Shabaab ah ku dilay gobolka Hiiraan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada dowlada Soomaaliya oo sarkaal al-Shabaab ah ku dilay gobolka Hiiraan
August 13, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Kooxda hubaysan ee al-Shabaab. Sawirka: AFP.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya ayaa ku dilay sarkaal sare oo al-Shabaab ah meel u dhow magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan maanta oo Sabti ah, sida uu sheegay sarkaal.
Taliye ku-xigeenka howlaha amaanka ee Beledweyne, Maxamed Ibraahim, ayaa wakaalada wararka dowlada Soomaaliya (Sonna) u sheegay in taliye al-Shabaabka ah lagu dilay intii uu socday dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dowlada iyo maleeshiyada.
“Ciidamada dowlada waxay dileen sarkaalkii al-Shabaab u qaabilsanaa howlaha militariga ee gobolkan, waxaana la dhihi jiray Cabdi Aadan, wuxuu dhawaan ku bireeyay oday nabad-doon ahaa meel u dhow Beledweyne, maanta ayuu ku dhintay dagaalka u dhaxeeyay ciidamada dowlada iyo maleeshiyada oo ka dhacay aagaas, ciidamada guul bay ka gaareen howlgalkaas,” ayuu yiri Maxamed Ibraahim.
Ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa howlgalo ka dhan ah dagaalyahanada al-Shabaab ka waday sanadkan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.